Fursadaha Tabaruca ee Bulshada | Tonka Adeegaa
Laanqeyrta Cas ee Mareykanka
Markaad tahay tabaruce Laanqayrta Cas waxaad qayb ka tahay hay'adda ugu weyn adduunka ee samafalka. Waad la kulmi kartaa faa'iidooyinka shaqsiyadeed iyo xirfadeed ee gudbinta tamartaada si ay uga caawiso hagaajinta nolosha dadka bulshadaada iyo adduunka oo dhan.
Ka baxsan Ribbon Yellow - Chanhassen
BTYR waa urur isku xira xubnaha adeega milatariga iyo qoysaskooda taageerada bulshada, tababarka, adeegyada, iyo ilaha inta lagu jiro iyo kadib howlgalka.
Maktabadaha Degmada Carver
Fursadaha iskaa wax u qabso ee sanadka oo dhan ah ee loogu talagalay in lagu seexiyo buugaagta lagana caawiyo barnaamijyada gaarka ah.
Noqo qof mutadawiciin ah oo ka shaqeeya Guthrie oo ku kasbo tigidhada dhacdooyinka tiyaatarka. Waa inaad noqotaa 15 sano ama ka weyn oo aad awood u yeelatid 4 saacadood bishii. Codso khadka tooska ah.
Maktabadaha Degmada Hennepin
Maktabadaha Ridgedale, Minnetonka iyo Excelsior waxay leeyihiin fursado iskaa wax u qabso ah oo shaqsiyadeed sanadkii oo dhan. Ku buuxi Codsiga Tabaruca Dhallinyarada khadka tooska ah lana xiriir maktabadaha shaqsiyeed wixii baahiyo jira ah.
Gurigiisa waa urur aan macaash doon ahayn oo si toos ah adeegyo ugu siiya qoysaska Minnetonka ee u baahan. Dukaankiisa Gurigiisa Thrift wuxuu ku soo dhaweynayaa mutadawiciinta ardayda mashaariic kala duwan oo xiiso leh. Wixii macluumaad dheeraad ah, kala xiriir Martha Brannon taleefanka 612-325-4693.
Matxafka harada Minnetonka
Fursadaha looga shaqeeyo Steamboat Minnehaha iyo Dhacdooyinka Gaarka ah.
Matxafka Carruurta ee Minnesota
Fursadaha iskaa wax u qabso sanadka oo dhan si ay ula shaqeeyaan carruurta madxafka.
Tabaruceyaashu waxay kasbadaan tikidhada bilaashka ah ee waxqabadka markay soo bandhigaan oo ay ka shaqeeyaan dhacdooyin gaar ah.
Kafeeyeyaasha Taageera Badmaaxiinta
Skippers Taageerayaasha Badmaaxiinta waa koox taageerta adeeggaas ka tirsan Ciidanka Badda Mareykanka ee aan helin waraaqo ku filan una baahan kor u qaadis.
Tonka dhalinyarada Triathlon
Dhacdadan weyn ee bulshada, baaskiilka iyo dabaasha waxay u furantahay dhamaan wiilasha iyo gabdhaha fasalada 2-8. tartanku wuxuu dhacayaa Sabtida ugu horreysa bisha Maajo ee Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Bariga.
Baaskiil wadista masaafada sanadlaha ah oo dhex marta Bulshooyinka Lake Minnetonka oo ay maalgaliso Minnetonka Community Education, ayaa la qabtay Sabtidii ugu horreysay Ogosto. In ka badan 600 oo mutadawiciin ah ayaa loo baahan yahay!